I-MRB HPC088 Uhlelo Lokubala Abagibeli Okuzenzakalelayo lwebhasi
Isistimu yokubala imoto ye-MRB AI HPC199
I-MRB wifi footfall counter HPC015S
I-MRB Door people counter HPC001
Izesekeli ze-MRB ESL
Ukunemba okungu-95% kuya ku-98% ekubaleni abagibeli
Akuthintwa ukukhanya noma izithunzi.
Imithwalo ehlungiwe kanye nobude bethagethi kungavinjelwa
Amakhamera Amabili / 3D ubuchwepheshe othomathikhi counter umgibeli
Ngokuchofoza okukodwa umsebenzi wokusetha ngemva kokufaka
Ukuvuleka noma ukuvala umnyango kungabangela noma kumise isibali.
Ividiyo ingaqoshwa ku-MDVR yethu ( MDVR kuwebhusayithi yethu)
Abaningi bethu uhlelo lokubala abagibeli yimikhiqizo enelungelo lobunikazi. Ukuze sigweme ukukopela, asizange sibeke okuqukethwe okuningi kuwebhusayithi. Ungathintana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze bakuthumelele imininingwane enemininingwane mayelana nenkampani yethuuhlelo lokubala abagibeli.
I-HPC088 uhlelo lokubala abagibeli iwumkhiqizo wokunemba okuphezulu (98%+) wokubala abagibeli wokubala ngokuzenzakalela kwabagibeli bebhasi okusekelwe kubuchwepheshe bombono we-binocular stereo kanye nobuchwepheshe bokuhlaziya ividiyo. Ikhamera ye-binocular of theuhlelo lokubala abagibeli eklanywe ngomklamo wobunjiniyela ofana nomuntu iqoqa ulwazi lokunyakaza komgibeli ngesikhathi sangempela ebangeni lomnyango, futhi ibale ngokushesha idatha ye-3D yomgibeli oqondiwe ngephrosesa yesithombe, okuhlanganisa ubude bomgibeli oqondiwe\_ububanzi behlombe, njll., obungahambisani kuzici zomuntu Ukuhlunga okuzenzakalelayo kwezinto eziqondiwe (njengamatroli, izinto, njll.) kungafinyelela ukutholwa okufanayo kokunemba okuphezulu kungakhathaliseki ukuthi kuselangeni noma endaweni efiphele.
I-HPC088 uhlelo lokubala abagibeli ine-RS232, RS485, izinhlobo ezimbili zesixhumi esibonakalayo sedatha, kulula kakhulu ukuxhumana nezinhlelo zezinkampani zangaphandle ukuze ubone ukuxhumana kwedatha.
Ikhamera ye-binocular of the uhlelo lokubala abagibeli yamukela idizayini yobunjiniyela bamehlo omuntu, amakhamera e-CCD akhelwe ngaphakathi amabili ukuze aqoqe izithombe ze-3D zalokho okuqondiwe, futhi aqoqe ukusakazwa kwevidiyo kwesikhathi sangempela ngesivinini samafreyimu angu-25 ngomzuzwana. Iuhlelo lokubala abagibeliinomsebenzi wokulwa nokunyakaziswa futhi ifaneleka kakhulu ukusetshenziswa endaweni yebhasi. Ingakhanyisa ngokuzenzakalelayo ngokwendawo Amandla okukhanya okungeziwe kwe-infrared angasetshenziswa ngokujwayelekile emini noma ebusuku.
Iphrosesa yesithombe se- uhlelo lokubala abagibeli inephrosesa ye-DSP eyakhelwe ngaphakathi esebenza kahle kakhulu esebenza kahle kakhulu, ecubungula imininingwane yokusakazwa kwevidiyo yamakhamera amabili okubonana ngesikhathi sangempela ngokuya nge-algorithm yezithombe esethiwe, ibala inombolo yesikhathi sangempela yabagibeli abaphuma noma baphuma eminyango emibili ye-binocular camera. ibhasi, futhi ixhumana nenkampani yangaphandle ngokusebenzisa ukuxhumana kwe-RS232 ne-RS485 Uhlelo luqhuba ukushintshana kwedatha.
Iphrosesa yesithombe ingakhelwa ngaphakathi kwemojula ye-GGM (uyazikhethela), engakwazi ukubona ukuma kwe-GPS kwamabhasi kanye nokudluliswa kwedatha yenethiwekhi ye-3G\_4G, ukuze uhlelo lokubala abagibeli ingakha iqoqo ledatha eliphelele, ukudluliswa kwedatha, umsebenzi wokumisa imoto, nokuthunyelwa ngokushesha kwezinhlelo zokusebenza.
I uhlelo lokubala abagibeli iprosesa ifakwe endaweni efihliwe yophahla lwebhasi. Uma kusetshenziswa imojuli ye-GGM, uthi lwe-GPS\_GPRS kufanele lubekwe endaweni lapho isignali yamukelwe kahle.
Ividiyo yekhawunta yabagibeli ezenzakalelayo ye-MRB
Sinezinhlobo eziningi ze-IR uhlelo lokubala abagibeli, 2D, 3D, AI uhlelo lokubala abagibeli, kuhlale kukhona okuzofanelana nawe, sicela usithinte, sizoncoma ezifanele kakhulu uhlelo lokubala abagibeli ngawe emahoreni angama-24.
Okwedlule: I-MRB HPC168 ikhawunta yabagibeli ezenzakalelayo yebhasi
Olandelayo: I-MRB Mobile DVR yemoto
uhlelo lokubala oluzenzakalelayo lwebhasi
I-Automatic Passenger Counter
Ukubala kwabagibeli okuzenzakalelayo
uhlelo lokubala abagibeli oluzenzakalelayo lwebhasi
Ikhawunta Yabagibeli Yamabhasi
Inzwa Yokubala Abagibeli
Uhlelo Lokubala Abagibeli Bebhasi
Ikhamera ye-MRB Vehicle ye-DVR yeselula
I-MRB Mobile DVR yemoto
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-100 nasezifundeni ekhaya naphesheya. Ngokusekelwa okuqinile kwamakhasimende ethu, i-MRB yenze inqubekelaphambili enkulu.